Ny mpiaro ny tontolo iainana dia mandà ny fananganana insinerator vaovao roa ao Madrid | Fanavaozana maintso
Ny mpiaro ny tontolo iainana dia mandà ny fananganana insinerator roa vaovao ao Madrid
Portillo Alemanina | | fanodinana
Fandoroana fako Izy io dia endrika iray fitsaboana hiteraka angovo misy fako biolojika. Na izany aza, manana fihemorana sasany izy ireo toy ny fandefasana CO2 any amin'ny atmosfera mitranga mandritra ny fandoroana. Ireo mpiaro ny tontolo iainana dia tsy miombon-kevitra amin'ny fandoroana fako satria ny angovo azo avy aminy dia tsy manofa raha oharina amin'ny entona entina miditra amin'ny atmosfera.
Ao amin'ny Community of Madrid, ny fananganana incinerator roa vaovao hikarakarana ny fako. Na izany aza, vondrona maromaro momba ny tontolo iainana no naneho ny fandavany an'io paikady fitantanana io. Ity hetsika ity dia natolotry ny Minisiteran'ny Tontolo iainana momba ny fiarahamonina Madrid ary kasaina hatao eo anelanelan'ny taona 2017-2024.
Namana eto an-tany, ekôlôjiana miasa, Greenpeace, Madrid Clean Air-Zero Waste Platform, No Macro-landfill Platform, Eny Zero Waste ary Clean Air Rivas, dia nitaky ny hametrahana ny laharam-pahamehana amin'ny fisorohana, fampiasana indray ary fanodinana fako. Amin'izany fomba izany dia hanampy amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fako.
Nanolotra vahaolana vaovao momba ity drafitra fitantanana ity ihany koa izy ireo, mitaky ny firosoan'ny Minisiteran'ny Tontolo iainana amin'ny maodely fitantanana itsinjaram-pahefana sy ara-drariny kokoa ho an'ny Vondron'olona Madrid. Nametraka tolo-kevitra maromaro izy ireo ka anisan'izany ny:
Angony ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny organika, amin'ny fomba toy izany dia azo sarahina ireo karazana fako biolojika araka ny niandohany.
Hatsarao ny fanangonana fisafidianana ireo fitaovana sisa tsy voajanahary (plastika, kaontenera, baoritra, vera, sns.)
Mamorona fotodrafitrasa sy maodely ampiasaina ny fako, satria tsy misy tsara noho ny fampidirana fako amin'ny tsingerim-piainana.
Ary farany, nanitrikitrika izy ireo fa hodinihina ny fepetra sy ny vahaolana mahomby, toy ny amidy miaraka amin'ny fametrahana kaontenera mba hialana amin'ny fandaozana azy ireo ary hampihenana ny habetsaky ny fako ilaina amin'ny doro-fandoroana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Ny mpiaro ny tontolo iainana dia mandà ny fananganana insinerator roa vaovao ao Madrid
Jaguar dia mampahafantatra ny fiara misy heriny voalohany